Maitiro ekunyunyuta ehofisi | Law & More B.V.
Law & More inokoshesa kugutsikana kwevatengi vedu. Yedu firm inoshandisa zvakanaka kwazvo kuedza kuve pabasa rako. Zvisinei zvinogona kuitika kuti hauna kugutsikana nezveimwe chikamu chemasevhisi edu. Iwe uchawana pazasi chiito chaunogona kutora mumamiriro akadaro.
Kana iwe usingagutsikane nezve kugadzirwa uye kuitwa kwechibvumirano chekugoverwa, mhando yemasevhisi edu kana huwandu hweinvoice yako, unokumbirwa kuendesa zvaunopikisa kutanga kune rimwe gweta rako. Iwe unogona zvakare kubata Mr. TGLM Meevis yesimba redu. Femu yedu inobata zvinyunyuto zvinoenderana nemaitiro sezvakatsanangurwa mugwaro renyunyuto rehofisi.
Ticha, mukukurukurirana newe tinowana mhinduro yedambudziko rakasimudzwa nekukurumidza sezvinobvira. Isu tichagara tichisimbisa mhinduro yakadaro mukunyora. Iwe unogona kutarisira kugamuchira maitiro edu kuchinyunyuta chako mukunyora mukati memavhiki mana. Muchiitiko icho chatinoda kutsauka kubva pane ino nguva, isu tichakuzivisa iwe munguva uye isu totaura chikonzero chekutsauka uye iyo nguva mukati iwe ungatarisira mhinduro kubva kwatiri.
Chinyorwa 1 Tsanangudzo
Munzira iyi yekunyunyuta mazwi akanyorwa pasi apa achave nezvinoreva zvinotevera:
nyunyuto: chero chinyorwa chakanyorwa chekusagutsikana neye kana panzvimbo yevatengi vis-a-vis gweta kana munhu (munhu) anoshanda pasi pebasa rake maererano nekupedza kana kuuraya kwekuita kwevatengi kwehunyanzvi mabasa.overeenkomst van opdracht), mhando yemasevhisi akadaro akapihwa kana huwandu hwakaverengerwa mabasa akadaro, kunze, zvisinei, kunyunyuta mukati mechinorehwa nendima 4 yeNetherlands Mutemo paMugweta weProfessional (Advocatenwet);
kunyunyuta: mutengi kana mumiriri wake, achinyunyuta;
mukuru wezvekunyunyuta: Gweta riri kupomerwa kubata chinyunyuto, pakutanga Mr. TGLM Meevis.
Chinyorwa 2 Chikamu chekushandisa
2.1 Iyi nzira yekunyunyuta inoshanda kune kwese kubatanidzwa kwehunyanzvi mabasa anopiwa na Law & More B.V. kune vatengi vayo.
2.2 Iri ibasa regweta rega re Law & More B.V. kubata zvese zvichemo zvinoenderana neiyi nzira yekunyunyuta.
Chinyorwa 3 Zvinangwa
Chinangwa cheiyi yekunyunyuta maitiro:
kuisa pasi maitiro ayo zvichemo zvevatengi zvinogona kugadziriswa nenzira yakatarisana nemhinduro uye mukati menguva yenguva yakafanira;
kuisa pasi maitiro ekutanga chikonzero (s) chekunyunyuta kwemutengi;
kuchengetedza uye kugadzirisa hukama huripo hwevatengi nekubata zvichemo nenzira yakakodzera;
kusimudzira mhinduro kune chero kunyunyuta nenzira yakatarisana nevatengi;
kuvandudza kunaka kwemasevhisi nekugadzirisa nekuongorora zvichemo.
Chinyorwa 4 Ruzivo pamusoro pekutanga kwemasevhisi
4.1 Maitiro ekunyunyuta aya akaitwa pachena. Mutsamba ipi neipi yekubatana nemutengi, mutengi anoziviswa kuti pane nzira yekunyunyuta iriko, uye kuti maitiro aya achashanda kune masevhisi akapihwa.
4.2 Mazwi akajairika ekubata (mazwi nemitemo) inoshanda kune chero musangano wevatengi (zvakarebvumirwa chero chero tsamba yekubvumirana pamwe nemutengi) inofanirwa kuratidza iyo yakazvimirira kana boka iro / iro kunyunyuta kusati ragadziriswa mukuwirirana nenzira iyi yekunyunyuta kunogona kuendeswa kuitira kuti riwane chisarudzo chinosunga.
4.3 Zvichemo zviri mukati mezvinorehwa nechinyorwa 1 cheiyi nzira yekunyunyuta iyo isina kugadziriswa mushure mekunge yagadziriswa maererano nemaitiro ekunyunyuta aya anogona kuendeswa kuDepute Committee Advocacy (Geschillencommissie Advocatuur).
Article 5 Mukati yekunyunyuta maitiro
5.1 Kana mutengi akasvika kuhofisi nechichemo maererano nemirayiridzo yakapihwa Law & More B.V.., chichemo chichaendeswa kune mukuru wekuchema.
5.2 Mukuru wekuchema achazivisa munhu anenge amhan'arirwa pamusoro pekumhan'ara uye achapa mumhan'ari uye munhu anenge apomedzerwa chichemo mukana wekutsanangura chichemo chacho.
5.3 Munhu akapomedzerwa chichemo ichi anoedza kugadzirisa nyaya iyi pamwe chete nemutengi akakodzera, angave kana kwete nekuda kwekupindira kwemuchuchisi.
5.4 Mukuru wekuchema-chema achagadzirisa chichemo mukati memavhiki mana mushure mekugamuchira chichemo, kana kuzivisa mumhan'ari, achitaura zvikonzero, zvekutsauka kweshoko iri, zvichiratidza nguva iyo pfungwa pamusoro pekunyunyuta ichapihwa.
5.5 Mukuru wezichemo anofanira kuzivisa mumhan'ari uye munhu anenge anyunyutirwa zvakanyorwa pamusoro pemafungiro nezvakakodzera chichemo, angave kana nezvakataurwa.
5.6 Kana chichemo chacho chikabatwa nenzira inogutsa, mumhan'ari, mupomeri uye munhu akapomedzerwa chichemo chake vachasaina maonero avo pamusoro pekukodzera kwenyunyuto.
Chinyorwa 6 Chakavanzika uye chemahara kubhadhara kunyunyuta kubata
6.1 Mukuru wezichemo uye munhu anenge apomerwa chichemo ichi vanoona zvakavanzika maererano nekubata chichemo.
6.2 Mumhan'ari haafanire kupihwa muripo maererano nemitengo yekugadzirisa chichemo.
Chinyorwa chechinomwe Zvitoro
7.1 Mukuru wezichemo anova nebasa rekugadzirisa chichemo panguva kwayo.
7.2 Munhu akapomedzerwa chichemo chake anofanira kuramba achiudza mukuru wezichemo nezve chero kusangana nemumhan'ari uye chero mhinduro inogoneka.
7.3 Mukuru wekuchema-chema achachengeta mumhan'ari achiziviswa nezvemabatirwo enyunyuto
7.4 Mukuru wekunyunyuta achaona kuti faira pakunyunyuta iri kuchengetwa.
Article 8 Kunyunyuta kunyoresa
8.1 Mukuru wezichemo anonyoresa chichemo, achiratidza musoro wenyunyuto.
8.2 Chichemo chinogona kukamurwa kuita misoro yakaparadzana.
8.3 Anonyunyuta anozopota achitaura pamusoro pekubatwa kwechero zvichemo uye achapa kurudziro kuitira kudzivirira zvichemo zvitsva zvinomuka nekuvandudza mashandiro.
8.4 Chirevo chero chipi zvacho uye kurudziro zvinokurukurwa uye kuendeswa pakuita sarudzo kamwe chete pagore.